ကြယ်စင်တွေကြား ပုန်းခိုသူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ကြယ်စင်တွေကြား ပုန်းခိုသူ	9
- Mr. Pocket
Posted by Mr. Pocket on Oct 21, 2015 in Arts & Humanities, Creative Writing, Poetry |9comments
ပန်းတစ်ပွင့်သူ ခြွေယူချင်သလား… ၊
About Mr. Pocket
Mr. Pocket has written9post in this Website..
View all posts by Mr. Pocket →	Blog
Mr. Pocket says: ငါလိုလူဇမ္ဗူမှာရှိသေးလား ငါကွ ခေါင်းစဉ်မေ့တွားဘီ… တားကို ခွင့်လွှတ်ပါနော်…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခေါင်းစဉ်က ဘာတုန်း
Mr. Pocket says: ကြယ်စင်တွေကြား ပုန်းခိုသူ
Alinsett @ Maung Thura says: ပိုစ့်က ခေါင်းစဉ် မတပ်လိုက်ရင်.. .. ကွန်ပြူတာ မောက်စ်နဲ့ ကလစ်ပြီး ဝင်ဖို့ ခက်သဗျ…
ခေါင်းစဉ် စာသားကို ချိန်…ကလစ်ပြီး ဝင်မှ… ပိုစ့်ထဲရောက်တာဆိုတော့… ကလစ်စရာ ခေါင်းစဉ် စာသား မရှိတဲ့အခါ…
ပိုစ့်ထဲ ဝင်ဖတ်ဖို့… ခက်တယ်ဆိုပါတော့…
ကျနော်တောင်… Home ကနေ… ဝင်မရလို့.. Dashboard > All Posts ထဲကနေ… ဝင်လိုက်ရ… ဆိုတော့… နောက်လူတွေ ဖတ်ချင် ဝင်ချင်… လွယ်အောင်… ခေါင်းစဉ် နေရာမှာ.. အစက်ကလေး ငါးစက် ချခဲ့တယ်နော့…။
အဲ့ အစက်ကလေးတွေကို ထောက်ပြီး.. ဝင်ဖတ်လို့ ရသွားပြီပေါ့…။
.ခေါင်းစဉ် သတိရ ရင်…. ပြောလေ…
အားတဲ့ မော့ တစ်ယောက်ယောက်က အဲ့ အစက်ကလေး ငါးစက်ကို ဖျက်ပြီး..ထည့်ပေးလိမ့်မယ်..
Mr. Pocket says: ဟုတ်ကျေးဇူးဗျ.. ကျွန်တော် အရမ်းမေ့တယ်ဗျ.. အဲ့ဒါ ရေးပြီးမှ ခေါင်းစဉ်ကို စဉ်းစားမယ်ဆိုပြီး.. လုပ်ထားတာ.. ရေးလည်းပြီးရော ၀မ်းသာအားရနဲ့ publish လုပ်လိုက်တာ… အဲ့ဒါနဲ့ အဲ့လိုမေ့ကုန်ရော
မြစပဲရိုး says: အဲလို ခေါင်းစည်း မပါရင် ဘေးက ကွန်မန့် count လုပ်တဲ့ နေရာ ကို နှိပ် ဝင်ပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ရေးလို့သာရေး ခုနှစ်စင်ကြယ်လေး
Shwe Ei says: -ကဗျာရေးတော့လဲ ဖတ်လို့ကောင်းသား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ကဗျာဆရာကိုအိပ်ကပ်
.ချစ်သူပြုံး တုန်းတုန်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.